Angase ethathelwe izinyathelo zomthetho uVatiswa
USHONA noConnie Ferguson beFerguson Films, bahlongoza ukuthathela uVatiswa Ndara izinyathelo zomthetho ngencwadi ayibhalele uNgqongqoshe wezamaCiko uMnuz Nathi Mthethwa. Isithombe: Sigciniwe
INKAMPANI ekhiqiza imidlalo yethelevishini ephethwe abashadikazi uConnie noShona Ferguson iFerguson Films isihlongoza ukuthathela inkakha yomlingisi wakuleli uVatiswa Ndara izinyathelo zomthetho ngezinsolo azineke ngale nkampani zokuxhashazwa.
Ngokombiko weTshisaLIVE, ummeli womndeni wakwaFerguson uMnuz Brendan de Kooker ukuqinisekisile ukuthi laba bashadikazi bahlela ukuthathela uVatiswa izinyathelo zomthetho.
"Sicabanga ukuthathela umlobi wencwadi izinyathelo zomthetho kanti angeke siphendule eminye imibuzo okwamanje," kusho uDe Kooker wenkampani yabammeli iDe Kooker Attorneys.
Encwadini ayifake enkundleni uTwitter ebeyibhekiswe nguNgqongqoshe wezamaCiko uMnuz Nathi Mthethwa, uVatiswa usole le nkampani ngokumxhaphaza ngemali eyibeke etafuleni yokumkhokhela ngokuqopha kwakhe isizini yesithathu yomdlalo Igazi. Kule ncwadi uVatiswa uveze ukuthi iFerguson Films inqabile ukumkhokhela uR1 million ngokuqopha, yaphinde yenqaba futhi ukumkhokhela isamba esingaphansi sikaR700 000. Esikhundleni semali abeyifuna uVatiswa wethenjiswe ukukhokhelwa uR110 000 ebekusazoxetshulwa intela kuwona nangakujabulelanga waze wabhalela uMthethwa incwadi emnxenxa ukuthi abheke izinkampani zamafilimu ezixhaphaza abalingisi.
UMthethwa uphendule khona enkundleni uTwitter, ebonga uVatiswa ngokumbhalela eveza nokuthi uzolubhekisisa udaba alubeke encwadini.
Omunye oveze ukungenami ngendlela aphathwa ngayo yiFerguson Films uKeke Mphuthi owayelingisa emdlalweni iThe Throne. UKeke uveze enkundleni uTwitter ukuthi ngesikhathi ezothatha ikhefu yokukhulelwa kulo mdlalo watshelwa ukuthi uzobuya isekhona indawo yakhe, kepha eseqede ukushutha ngaphambi kokuthatha ikhefu watshelwa ukuthi inkontileka yakhe iyaphela. UKeke uthi lokhu kwamhlukumeza kakhulu ngoba wayesanda kuthola indawo entsha yokuhlala elungiselela ukuthola umntwana.
He expressed how they as an agency claim me and that my job was safe ...most importantly ensuring that I’d have my place when I get back after 6weeks